China HW 1220 * 2440mm Okoume ngamaplanga mveliso kunye nabenzi | Changyu
Ubuso / uMva: Okoume / isiko
Inkcitho Ipoplar, umthi onzima, umhlathana, okoume, i-birch, ipayini, i-combi, i-ect.
Phawula Ii-veneers ze-EV zikwabiza ngokuba yiplywood eyenziwe ngamaplanga ephindwe kabini, Le yenye yeebhodi zefanitshala ezithengisa kakhulu. Sisebenzisela ukucebisa abathengi ukuba basebenzise ipoplar, isiseko se-combi kunye nesiseko se-eulyptus sokulwela iimveliso eziphezulu. Iindidi zomhlaba zinokuba luthotho olwahlukeneyo, njenge-oki, itiak, ipoplar, icherry njalo njalo kwaye sisebenza kunye neendawo ezininzi zokugaya ezinkulu zokuvelisa kwakhona umvelisi we-multichoice. kwaye le mveliso ilungele inqanaba lefanitshala kunye nezinto eziphambili zokukhetha kuqala.
Egqithileyo I-HW 1220 * 2440mm Umgangatho ophezulu wePlywood yeeNgcaciso zeNtengiso kunye neBanga leFanitshala
Okulandelayo: HW Radiata Pine F / B ngamaplanga oRhwebo
Eyona Plywood yoMgangatho
I-Okoume Plywood yamashishini